Izindaba - Ungazisebenzisa kuphi izingxenye zepulasitiki
Izingxenye zepulasitiki zenziwa ngokubunjwa kwesikhunta nezinye izindlela zokucubungula, lapho ubukhulu nomsebenzi zihlangabezana nezidingo zabaklami.
Ngaphezu kwe-80% yezingxenye zepulasitiki zibunjwe ngomjovo wokujova, okuyindlela eyinhloko yokuthola izingxenye zepulasitiki ezinemba kahle.
Izingxenye zepulasitiki zomjovo zingene kuzo zonke izici zemisebenzi yabantu, ezisetshenziswa kakhulu kwezokuxhumana ngogesi, izinto zikagesi, ezikagesi, izinsimbi zomculo, ezokuphepha, ithrafikhi yezimoto, ukunakekelwa kwezokwelapha, izinto zokusebenza zansuku zonke neminye imikhakha.
Izigaba zomkhiqizo eziyinhloko yilezi:
1. Imikhiqizo yezokuxhumana ye-elekthronikhi kanye ne-electronics yabathengi (izindlu zepulasitiki, indawo ebiyelwe, ibhokisi, ikhava)
Omakhalekhukhwini, ama-headphone, omabonakude, izingcingo zevidiyo, imishini ye-POS, insimbi yomnyango.
Imishini kagesi (ipulasitiki, ikhava, isitsha, isisekelo)
Umenzi wekhofi, i-juicer, ifriji, i-air conditioner, i-fan washer ne-oven microwave.
3. Imishini kagesi
Imitha kagesi, ibhokisi elisebenza ngogesi, ikhabethe likagesi, isiguquli semvamisa, ikhava yokufaka kanye nokushintsha
Insimbi (izindlu zepulasitiki, ikhava)
I-Voltmeter, i-multimeter, i-barometer, umtshina wokuphila
5. izingxenye Auto
Uhlaka lomzimba wedeshibhodi, ubakaki webhethri, imodyuli engaphambili, ibhokisi lokulawula, ifreyimu yokwesekwa kwesihlalo, i-placenta eseceleni, i-fender, i-bumper, ikhava ye-chassis, isithiyo somsindo, uzimele womnyango ongemuva
6.Idivayisi yethrafikhi nemishini yezimoto (ikhava yesibani, indawo ebiyelwe)
Isibani sesiginali, uphawu, umhloli wotshwala,
7. Ukunakekelwa kwezempilo nezempilo
Amalambu okusebenza, i-sphygmomanometer, isirinji, ithawula, ibhodlela lemithi, i-massager, idivayisi yokususa izinwele, imishini yokuzivocavoca
8. Izidingo zansuku zonke
Izihlalo zepulasitiki, izixubho zepulasitiki, izitsha zepulasitiki, amabhakede epulasitiki, ipulasitiki, izinkomishi zepulasitiki, izingilazi, izembozo zangasese, amachibi, amathoyizi
Imikhiqizo ehlukene idinga osayizi abahlukahlukene, ubujamo, ukusebenza kahle, ukubukeka nokusetshenziswa, ngakho-ke kunezinhlobo ezahlukahlukene zesikhunta nezinqubo zokubumba umjovo ezisetshenziselwa ukuzenza.
IMestech ineminyaka engaphezu kwengu-10 yokwenziwa komjovo wesikhunta kanye nesipiliyoni sokukhiqiza umjovo, singakunikeza ngemikhuba yomjovo oyifisayo nemikhiqizo yomjovo kanye nezinsizakalo ngokusho kwakho.
2. umjovo wokubumba izingxenye ezincane, izingxenye ezinkulu, imicu, amagiya, amagobolondo, imibala emibili, nokufakwa kwensimbi.
3.Ukuhlobisa noma ukuhlobisa indawo: ukuphrinta kwesikrini, ukupenda kwesifutho, i-electroplating, ukuhlobisa kwangaphakathi kwesikhunta, ukuphrinta kokudlulisa amanzi.
Uma udinga imikhiqizo yepulasitiki yemikhiqizo yakho, noma udinga ukwazi okwengeziwe, sicela uthinte abakwaMestech ukuthola ikhotheshini noma eminye imininingwane.